कान दुखेर हैरान हुनुहुन्छ ? अब ५ मिनेटमै निको पार्ने यस्तो छ घरेलु उपाय - SangaloKhabar
कान दुखेर हैरान हुनुहुन्छ ? अब ५ मिनेटमै निको पार्ने यस्तो छ घरेलु उपाय
काठमाडौँ । तपाई कान दुखेर हैरान हुनु भएको छ रु कि तपाईको बच्चाले सधै कान दुख्यो भनेर सताइरहेको छ । अस्पताल जाँदा र आधुनिक औषधी खाँदा खाँदै पनि सञ्चो नभएर पिडित हुनु हुन्छ भने यो जानकारी तपाइको लागि हो ।तपाईलाई थाहा नहुन सक्छ तपाई हाम्रो भान्सामा सधै पाइने तरकारी प्याँज कान दुखाइको अचुक औषधी हो । कान सुन्निने, चिलाउने र संक्रमण भएको अवस्थमा तपाईले ५ मिनेटमानै आराम पाउन प्याज प्रयोग गरेर उपचार गर्न सकिन्छ।
यसको कुनै साइड ईफेक्ट पनि छैन । यसका लागी सवै भन्दा पहिले प्याँजको रस निकाल्ने, रसलाई रुईमा चोपेर कानमा थोपा थोपा गरे चुहाउने, प्याजको रस कान भित्र छिरे नछिरेको भने विचार पुर्याउनु पर्छ । प्याजको रसले कान भित्र छिरेर विभिन्न किसिमका संक्रमण पनि ठिक पार्छ । यस बाहेका पनि प्याज ब्लड सुगर, इंफेक्सन, मुटुका लागि उपयोगि मानिन्छ भने शरिरको रोग प्रतिरोध क्षमता बढाउँछ।
१. कानभित्रको फोहोर सफा गर्ने पुरानो तरिका कानभित्र एक वा दुई थोपा बदामको तेल हालि उहि दिशामा टाउको ढल्काएर राख्नुहोस् । ५ मिनेटसम्म यसरी राख्नुभयो भने जमेको फोहोर लेदो बन्नेगर्छ र विस्तारै बाहिर निस्कने गर्छ ।
२. बदामको तेलमा तोरीको तेलपनि मिसाउन सक्नुहुनेछ । तर बदामको तेलको मात्रा अलि धेरै हुनुपर्छ । तेलको प्रयोगबाट तपाईंको कानमा रहेको जमेको फोहर पानी बनेर बाहिर निस्कनेछ ।
३. बदामकाे तेल र तोरीको तेल जस्तै बेबी तेलपनि प्रयोग गर्नसक्नुहुन्छ । तर तोरीको तेलमा बेबी तेल मिसाउँदा तोरीको तेलको मात्रा धेरै हुनुपर्छ । तेल प्रयोगगर्दापनि तपाईंको कानमा फाहोर निस्केन या दुख्यो भने चिकित्सकको मा जानुहोस् ।
४.कानमा रहेको फोहोर निकाल्न वा कान चिलाउँदा हामी सिन्का वा हाइड्रोजन पाराक्साइड प्रयोग गर्नु हुन्न । कान संवेदनशिल भएकाले घोँच्ने बस्तु प्रयोग गर्नुहुँदैन । हामीले हयरपिन जस्ता कानमा घोँच्ने वस्तुप्रयोग गर्दा कानको जालि विग्रने खतरा हुन्छ ।
बाल बालिका कान सफा गर्ने सुरक्षित तरिका के हो ?
डा.अरुण कुमार सिंह, बालरोग विशेषज्ञ, बी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान
बि.पी. कोइराला स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठानका बालरोग बिभागमा काम गर्दा शिशुहरू बाल बालिका को परिबार शिशु बाल बालिका को कान सफा गर्ने सुरक्षित कसरी गरने भनि जानकारी लिने आउछ, म बि।पी।
कोइराला स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठानका बालरोग बिभाग बाल रोग बिषेशज्ञ हु / यहाँ खास गरि जनकपुर ,राजविराज,सिरहा ,धरान,मोरंग,सपतरी,बिराटनगर,बिर्तामोड ,सुनसरी ,कोशी आदि बाट शिशु बाल बालिका को कान सफा गर्ने सुरक्षित तरिका बारे जानकारी लिन म कहा आउने गर्छ /
सब जब बाल बालिका सानो हुन्छ तब उसको हरेक काम मुश्किल हुन्छ र सबैभन्दा मुश्किल काम बाल बालिका को कान सफा गर्नु नै हुन्छ ।
कानमा बस्नेबाला वैक्स एक साधारण पदर्था हुन्छ जो सबै मानिसहरुको कानबाट निस्किनछ, यो कुनै प्रकारले संक्रमण हुदैन र न त यसले बाल बालिकालाई सुन्ने क्षमतामा असर पार्दछ । कान सफा गर्नाले न की कानको फोहोर निस्किन्छ बरु डेड सेल्स पनि निस्किन्छ ।
सानो बाल बालिकाको कान सफा गर्दाको समयमा केयौ कुराहरुलाई ध्यानमा राख्नु आवश्यक हुन्छ । बाल बालिकाको कानमा कुनै पनि नुकिला चीज नछिराउनुस् नत्र चोट वा घाउ हुने खतरा हुन सक्छ । बाल बालिकाको कानलाई सधै सही तरिकाले मात्र सफा गर्नुहोस् । ज्यादै सावधानी अपनाएर र ध्यान दिएर मात्र सफा गर्नुहोस् ।
बाल बालिकको कानलाई सफा गर्नुलाई सबैभन्दा राम्रो समय उसलाई नुहाउनु भन्दा पहिले हुन्छ ।यदि मालिश गर्नु हुन्छ भने मालिस पछि तपाईको बच्चाको कानलाई सावधानीले सफा गर्नुहोस् । यदि तपाई बाल बालिका लाई नुहाइरहनुभएको हुन्छ तब उसको कानहरुमा तातो कपडाले पोछिदिनुहोस् । यस्तो नियमित रुपले गर्नुपर्छ ।
यस्तो गर्नाले तपाईको बच्चालाई कान सफा रहन्छ, वैक्स निस्किहाल्छ र फोहोर जम्न पाउदैन १ कटन स्वैबस न छिराउनुहोस् ।बाल बालिका को कानलाई सदैव बेबी इयर बडले सफा गर्नुस् । ज्यादै गहिराइसम्म बड न छिराउनुहोस नत्र कानको पर्दामा चोट पुग्ने डर रहन्छ । बाल बालिकाको कान सफा गर्ने समयमा केयौ पटक मानिसहरुले घरेलु तरिकाहरुको प्रयोग गर्छन् ।तस्तो न गर्नुस १कानमा केही चीज न राख्नुहोस् ।
इयर बडले मात्र सफा गर्नुस् र फालतुको डप या अन्य तरल पदार्थ नराख्नुहोस् ।बाल बालिकाको कान कलिलो हुन्छ र तयसलाई इन्फेक्सन को खतरा हुन सक्छ । तर यदि तपाईको बाल बालिका को कानमा धेरै बढी वैक्स निस्कियो भने डाक्टरसँग सल्लाह अवशय लिनुस् ।कहिले काही बाल बालिका हरुको कानलाई सफा गरेर पनि कुरा हुदैन । यस्तोमा डाक्टरी सल्लाह लिएर कुनै डप पनि हाल्न सकिन्छ ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, बैशाख ११, २०७४ समय: १७:४३:४१